प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने
अनलाइन शिक्षण थाल्न किन आनकानी ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा झर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-२०७६/७७ सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने ...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको अवस्थामा सिटिजन्स बैंकले आफ्ना समस्त कर्मचारीहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कोभिड-१९ बीमा गराएको छ । बैंकमा कार्यरत स्थायी, प्रशिक्षार्थी, करार, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र ...
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले हाल कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गराएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विप्रेषण सेवा अत्यन्त जरुरी भएको र निरन्तर रुपमा सेवा प्रदान गर्नु परेको हुनाले ...
काठमाडौँ । कुमारी बैंकको चन्द्रगढी शाखाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत &lsquo;एकका लागि एक अभियान&rsquo;का साथ झापाका क्वारेन्टाइनमा खाद्य सामग्री वितरण गर्दै आएको सहारा नेपाललाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । बैंकले सहारा नेपालमार्फत संस्थालाई १ हजार ...
काठमाडौँ । किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले मिस्डकल बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सदस्यहरुलाई प्रविधीमैत्री सुविधा प्रदान गर्ने अभिप्रायले सञ्चालनमा ल्याईएको उक्त &ldquo;मिस्डकल बैंकिङ&rdquo; सेवा बिहिबारबाट सुचारु गरेको संस्थाले जनाएको छ ...
कोरोनासँग लड्न स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गर्यो १ करोड १६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग
डब्लूएहओको बैठकमा ताईबानलाई बोलइएन
आमासंग रिसाएर यी पाँचबर्षे बालक आफै गाडी चलाएर हाईवेमा हिडे
देशभरका एम्बुलेन्सलाई तयारी अबस्थामा राख्न सरकारको आग्रह
बाग्लुङकी संक्रमित व्यक्तिसँगै आएका तीन युवाकाे नतिजा नेगेटिभ